2. PPT Type Change (Application Form) | Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar, Los Angeles, U.S.A
Home » Data » 2. PPT Type Change (Application Form)
Requirement: PPT Type Change Application Form
(က)နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစား ပြောင်းလဲခွင့် လျှောက်ထားခြင်း ညွှန်ကြားချက်
ကျောင်းသားအဖြစ်မှ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်မှ ကျောင်းသားအဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ်မှ မှီခိုသူအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း၊ မှီခိုသူအဖြစ်မှ အလုပ်လုပ်သူအဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ သင်္ဘောသားအဖြစ်မှ ကုန်းပေါ်တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ အဖြစ်သို့လည်းကောင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစား များအား ပြောင်းလဲလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
– နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၄)စုံ
– သင်္ဘောသားဖြစ်ပါက CDC မူရင်းနှင့် မိတ္တူ(၄)စုံ
– အ‌မေရိကန်နိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြား ရောင်စုံမိတ္တူ ၊ သို့မဟုတ်၊ ဗီဇာ အ‌ထောက် အထား၊ သို့မဟုတ်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် အေထာက်အထား(၄)စုံ
– အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ် ပြောင်းလဲခွင့် လျှောက်ထားပါက အလုပ်ခန့်စာမူရင်းနှင့် အလုပ်စတင်လုပ်ကိုင်သည့်နေ့မှစတင်၍ ပေးဆောင်ရမည့်ဝင်ငွေခွန် (Money Order သီးခြားပေးပို့ပါရန်)
– ကျောင်းသားအဖြစ်ပြောင်းလဲခွင့် လျှောက်ထားပါက ကျောင်းမှ ထောက်ခံစာနှင့် ကျောင်းသားကတ် ပြားမိတ္တူ(၄)စုံ
– မှီခိုသူအဖြစ် ပြောင်းလဲခွင့် လျှောက်ထားပါက မည်သူ့အား မှီခိုကြောင်း ဖော်ပြ၍ ၎င်း၏ ဝင်ငွေခွန် အကျေပေးဆောင်ထားသောပြေစာမိတ္တူ(၄)စုံ
– သင်္ဘောသားမှ ကုန်းပေါ် အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအဖြစ် လျှောက်ထားပါက ဖြစ်ပါက ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ SECD မှ သတ်မှတ်ထားသော သင်္ဘောသား လစာနှုန်းထားပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန် ၁၀% ပေးဆောင်ခဲ့သော ပြေစာနှင့် ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခဲ့သည့်ပြေစာ(၄)စုံ
– ရောင်စုံဓာတ်ပုံ(၅)ပုံ ( ၆ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသောဓာတ်ပုံ၊ အရွယ်အစား ၂” x ၂”၊ နောက်ခံ အဖြူ)(ဓာတ်ပုံလေးပုံအား ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွင် ကပ်ပေးပါရန်)
– ထိုးမြဲလက်မှတ်(လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာနှင့် ပူးတွဲပါသတ်မှတ်ထားသည့် ပုံစံတွင် ထိုးမြဲ လက်မှတ်အား ရေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။)
– နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ခ US$ 25
– ငွေ‌ပေးသွင်းခြင်း (ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ အခွန်အခများ ပေးဆောင်ရာတွင် Money Order ၊ သို့မဟုတ်၊ Cashier Check ၊သို့မဟုတ်၊ Cash ဖြင့်‌ပေးသွင်းရန်၊ Pay to နေရာတွင် Myanmar Consulate General ကိုလည်းကောင်း၊ From နေရာတွင် ပေးသွင်းသူအမည်နှင့် လိပ်စာတို့ကို PPT Type Change Application Form ဖြည့်သွင်းရန်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အသစ်ခ၊ အပြန်လေယာဉ်စရိတ်တို့ကို MO/Check သီးခြားတစ်စောင်စီခွဲ၍ ပေးသွင်းရန်)
– စာပို့စနစ်ဖြင့် ပေးပို့ခြင်း (USPS/FedEx/UPS တို့ဖြင့် ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးသို့ ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံးမှ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ရန် အတွက် ကျသင့်တန်ဖိုး ပေးချေပြီးဖြစ်သော အပြန်စာအိတ် (Return Envelope) များ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးရန်)
PPT Type Change Application Form